आलेख ः धर्म र पर्यटनलाई जोड्दै तालबाराही मन्दिर
Tuesday October 15, 2019 |
पोखरा, १५ असोज । विश्वमै पर्यटकीय नगरीका रुपमा ख्याति कमाएको पोखरामा पुग्ने जो कोही पर्यटकले घुम्न नछुटाउने धार्मिक पर्यटकीय तीर्थस्थल हो तालबाराही मन्दिर ।
माछापुच्छ«े हिमालको छाया देखिने फेवा तालको बीच भागमा रहेको सानो टापुमाथि प्यागोडा शैलीको मन्दिर अवस्थित छ र यसलाई प्राचीनकालदेखि तालबाराही मन्दिरका रुपमा पुजिँदै आइएको छ ।
तालको बीचमा रहेका कारण तालबाराही हुन गएको सहजै अनुमान गर्न सकिने यो मन्दिर नेपालका प्रमुख शक्तिपीठमध्ये एक मानिन्छ । अति प्राचीन मन्दिरका रुपमा चिनिए पनि यसलाई कसले र कहिले निर्माण गरेका हुन् भन्ने यकिन तथ्य भने अनुसन्धानकै पर्खाइमा छ ।
तालबाराही मन्दिर संरक्षण–गुठी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हिक्मत कुँवरका अनुसार यस मन्दिरको अस्तित्व विसं १६६७ देखि कायम रहिआएको छ । कतै कतै विसं १४४७ देखि अस्तित्वमा रहेको भन्ने पनि अभिलेख पनि पाइएको छ । कास्कीका राजा कुल मण्डन शाहले मन्दिरमा खरको झुप्रो हालेर पहिलो पटक मन्दिर स्थापना गरेका थिए ।
प्राचीनकालमा माटाको ढिस्कामा एउटा शिला थियो त्यहीँ मन्दिर स्थापना गरी बाराहीका रूपमा पूजाआजा गर्न थालिएको किंवदन्ती छ । किंवदन्तीअनुसार तालको बीचमा टापु बनेको र त्यहीँ मन्दिर स्थापना गरिएको इतिहास निकै रोचक छ । बाराही देवीको शक्तिले तालको बीचमा टापु बनेको विश्वास छ । तालबाराही देवी सन्न्यासीको भेषमा रातको समय मन्दिर रहेको वरपरको गाउँ पुग्दा अरू कसैले बास दिएनछन् । एउटी बूढीआमाले बास दिएर रातमा आफूसँग भएको ढुटाको रोटी खान दिनुभएछ ।
श्रुतिअनुसार भोलिपल्ट बिहान बूढीआमालाई देवीले अब यहाँ जलमग्न हुन्छ त्यहाँ गएर बस्नु भनेकामा ठूलो बाढी भएर जलमग्न भयो र बीच भागमा ढिस्को मात्रै रह्यो । विसं २०१७ मा राजा महेन्द्रले अहिलेको स्वरूपमा मन्दिर निर्माण गरिदिएपछि यसले थप चर्चा पाउन थालेको हो । फेवाताल र यसको बीचमा अवस्थित तालबाराही मन्दिरको दर्शन गर्न वर्षभरि नै दर्शनार्थी आउने गर्दछन् । “पोखरालाई पर्यटकीय रुपमा चिनाउन फेवाताल यहाँको महत्वपूर्ण सम्पत्ति हो,” पोखरा पर्यटन परिषद्का पूर्वअध्यक्ष एवम् नेपाल पर्यटन व्यवसायी सङ्घ (निट) पोखराका अध्यक्ष सोम थापाले भने, “पोखराको गहना फेवाताल हो भने फेवातालको गहना तालबाराही मन्दिर हो ।”
तालको बीचमा मन्दिर अवस्थित छ भन्ने सुनेर पनि टाढाटाढाबाट दर्शनार्थी फेवाताल आउँछन् । त्यसकारण तालबाराही मन्दिरले पर्यटन र धर्म दुवैलाई जोडेको छ । यहाँ धार्मिक आस्था बोकेका र नबोकेका दुवै थरी पर्यटक घुम्न आउने गरेको उनी बताउँंछन् । धर्म र पर्यटनको दुवै रुपमा गन्तव्यस्थल बनेको यस मन्दिरमा वर्षैभरि दर्शनार्थी पुग्ने गरेका कारण मेला लागेजस्तो हुने गरे पनि यहाँ कोजाग्रत पूर्णिमाका दिन विशेष मेला लाग्छ । यस दिन बाराही दर्शन गरी जमरा सेलाउन टाढाटाढाबाट भक्तजन आउने गर्दछन् ।
नवरात्र अवधिभर यहाँ आउने भक्तजनका कारण नै मन्दिर परिसर दिनभर नै खचाखच भरिएको हुन्छ । तालमा देखिने माछापुच्छ«े हिमालको छाया र मन्दिर परिसरबाट देखिने हिमाली शृङ्खला, सराङकोट, विश्व शान्ति स्तूप जस्ता दृश्यले पर्यटकलाई लोभ्याउने गरेका छन् । तालको किनाराबाट पाँच मिनेटभित्रै डुङ्गा चढेर बाराही मन्दिरसम्म पुग्न सकिन्छ । प्राकृतिक मनोरम दृश्यको मज्जा लिन पाइने मात्र हैन तालबाराहीको दर्शन गरेपछि चिताएको पुग्ने धार्मिक विश्वासले पनि मानिसहरू मन्दिरमा पुग्ने गरेको स्थानीयवासी गणेश तिमल्सिनाले बताए ।
दैनिक चारदेखि छ हजारसम्म पर्यटक यहाँ दर्शनका लागि आउँछन् । यहाँ आएर विवाह बन्धनमा बाँधिए दाम्पत्य जीवन सुखी हुने जनविश्वास यस मन्दिरको अर्को विशेषता हो । जम्मा तीन रोपनी आठ आना दुई दाम क्षेत्रफलमा फैलिएको यस मन्दिरको थप संरक्षणमा तालबाराही मन्दिर संरक्षण–गुठी व्यवस्थापन समिति क्रियाशील रहँदैआएको छ । मन्दिर परिसरको भूबनोटको परीक्षणका लागि समितिले २५ मिटर गहिराइसम्मको माटो परीक्षण गरेको र परीक्षणबाट भूबनोट बलियो रहेको पाइएको अध्यक्ष कुँवरले जानकारी दिए । आउने पर्यटकको सुविधालाई दृष्टिगत गरी समितिले यहाँ बस्ने बेन्चको व्यवस्था गरेको छ र अघिल्तिर आकर्षणका लागि पानीको फोहोरा निर्माण गर्न लागिएको छ ।
समितिले मन्दिरको संरक्षणका लागि पुरातत्व विभागसँग पनि समन्वय गरिरहेको छ । “पोखराको गहना फेवाताल र यसको गहना तालबाराही हो, फेवातालको संरक्षणसँगसँगै तालबाराही मन्दिरको पनि संरक्षण गरिनुपर्छ,” स्थानीय युवा एवं ग्रामीण पर्यटन प्रवद्र्धन मञ्च, पोखराका पूर्वअध्यक्ष तारानाथ पहारीले भने । “पोखराको समग्र पर्यटकीय विकासमा तालबाराही मन्दिरको महत्वपूर्ण योगदान छ,” उनले भने, “मन्दिरका कारण बढेको पर्यटकीय आकर्षणलाई जोगाउन यसको संरक्षणमा स्थानीयवासीका साथै राज्यका सम्पूर्ण निकाय लाग्नु आवश्यक छ ।” – वासुदेव पौडेल, रासस
आलेख ः फुटसल ‘हब’ बन्दै राजधानी
काठमाडौँ, १३ साउन । फुटबलको सानो रुप ‘फुटसल’ अहिले देशभर लोकप्रिय बन्दै गइरहेको छ । बढ्दो जनघनत्व, वस्ती विस्तार र खुल्ला ठाउँको अभावका कारण शारीरिक व्यायाम गर्न नपाएकाहरुका लागि फुटसल…
आलेख ः आंगिक क्याम्पसमा आन्तरिक लेखा परीक्षणमै अनियमितता
काठमाडौँ, ३१ भदौ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतका आंगिक क्याम्पसमा केन्द्रबाट खटिएका आन्तरिक लेखापरीक्षकको टोलीले अनियमितता गरेको भेटिएको छ । त्रिविबाट काज लिएर गएका लेखापरीक्षकले क्याम्पसको आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने क्रममा ती क्याम्पसलाई…
आलेख ः एक मत बटुल्न चार हजार खर्च, तीन दिनको यात्रा
ताप्लेजुङ, ७ मंसिर । फक्ताङलुङ गाउँपालिकाको याङ्मा र गोला भारत र चीनको सिमानामा अवस्थित छन् । यी दुई ताप्लेजुङको अत्यन्त विकट स्थान हुन् । याङ्मा र ग्याब्लामा क्रमशः ५७…
संविधान कार्यान्वयनको अचुक अस्त्र निर्वाचन
काठमाडौँ, ९ मंसिर । संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिता, मौलिक हकसहितको समाजवाद उन्मुख आर्थिक व्यवस्थाको संस्थागत गर्न आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन एक उत्सवको रुपमा हरेक नेपाली मतदाताको घर आँगनमा…
आलेख ः ‘दोधारा चाँदनीमा सुख्खा बन्दरगाह र महाकालीमा नहर’ उम्मेदवारका एजेन्डा
भीमदत्तनगर । कञ्चनपुरमा नेपाली काँग्रेसका प्रभावशाली उम्मेदवार र गणितीय आधारमा बलियो देखिएको वाम गठबन्धनका उम्मेदवारहरु आसन्न प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रतिष्ठाको लडाइँ लडिरहेका छन् । कञ्चनपुरका निर्वाचन क्षेत्रहरूमा राष्ट्रिय राजनीतिमै…
आलेख ः अनुदान र औजारमा कमिसनको खेल
म्याग्दी, २४ असार । घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको कार्यालय म्याग्दीको अभिलेख अनुसार आव २०७४–७५ मा बेनीकी उद्यमी लीलादेवी पुनलाई ८४ हजार ४०० रुपैयाँ मूल्य पर्ने ढाका बुनाईसम्बन्धी उपकरण…
डा. केसीको आमरण अनसनसँंग गाँंसिएका गम्भीर प्रश्न—डा. डी आर उपाध्याय
चिकित्सा शिक्षामा माफियातन्त्रको अन्त्य गर्ने अठोटका साथ आन्दोलनरत डा. गोविन्द केसी २४ दिनदेखि आमरण अनसन बसिरहेका छन् । यो उनको पन्ध्रौं पटकको…
आलेख ः अस्पतालजन्य फोहरबाट वातावरणमा दुष्प्रभाव
काठमाडौँ, १३ साउन । अस्पताल र स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गर्दा औषधिजन्य फोहर व्यवस्थापनका लागि विसर्जन केन्द्र बनाउनुपर्ने कानूनी प्रावधान रहेको भएपनि त्यसलाई कडाइका साथ अपनाएको पाइँदैन । काठमाडौँ उपत्यकाका अधिकांश…
सरकार र समाजका लागि कठोर चुनौती बनेको शृंखलाबद्ध बलात्कार —डा डी आर उपाध्याय
केही वर्षअघिसम्म बलात्कारका एउटा घटना प्रकाशमा आउँंदा सबै आश्चर्यचकित हुन्थे तर अहिले सातामै कयौं बलात्कार हुँंदा पनि सामान्य भएको छ । अहिले डर लाग्दो…